अक्षय कुमारको फिल्म बेलबटममाथि खाडीका तीन देशले किन लगाए प्रतिबन्ध ? - लाल बिहानी
अक्षय कुमारको फिल्म बेलबटममाथि खाडीका तीन देशले किन लगाए प्रतिबन्ध ?
कोरोना लकडाउन र प्रतिबन्धका बीच थुप्रै महिनापछि सिनेमाघर मालिकले त्यतिबेला राहत पाए जब अभिनेता अक्षय कुमारको फिल्म ‘बेलबटम’ १९ अगस्टमा ठूलो पर्दामा रिलिज भयो ।
तर यो फिल्ममा सिक्रेट मिशनलाई भारतीय अधिकारीले नै पूरा गरेको देखाइएको छ । त्यसैले फिल्ममा तथ्यमाथि छेडछाड गरिएको मानिएको छ । यद्यपि, यो फिल्ममाथि लागेको प्रतिबन्धका कारण आधिकारिक रुपमा कुनै जानकारी सार्वजनिक भएको छैन ।
भारतमा सिनेमाघर अहिले ५० प्रतिशत क्षमताका साथ खुलेका छन् । यसको असर फिल्मको कमाइमा देखिएको छ ।
फिल्मको कमाईको ३० प्रतिशत हिस्सा महाराष्ट्रबाट आउँछ तर महाराष्ट्रमा सिनेमाहल बन्द भएका कारण फिल्मको कलेक्सनमा असर देखिएको छ ।
बक्सअफिस इन्डिया डट कमका अनुसार १९ अगस्टमा रिलिज भएको ‘बेल बटम’ ले पहिलो दुई दिनमा करिब पाँच करोडको कलेक्सन गरेको छ ।
अभिनेता अक्षय कुमारका पछिल्ला वर्षमा प्रदर्शित फिल्मको तुलनामा यो निकै मामूली कमाई मानिएको छ ।
तर फिल्मको कम कमाईका कारण निर्माता मधु भोजवानी चिन्तित छैनन् ।
उनले भने, ‘हामी खुसी छौं कि ५० प्रतिशत क्षमतासहित हामीले मौका पाएका थियौं र फिल्म आफ्नो उद्देश्यमा सफल रह्यो । हामी सिनेमाघरसम्म मानिसहरुलाई ल्याउन सफल रह्यौं ।’
मधु भोजवानी भन्छन्, ‘यो फिल्मार्फत् थिएटर मालिक, दर्शक, सहयोगी र फिल्म इन्डष्ट्रिसँग जोडिएका मानिसहरुले एउटा आशाको किरण देखेका छन् । थिएटर खोल्न अत्यावश्यक छ भनेर सबैले प्रोत्साहन पाएका छन् ।’
फिल्म बेल बटममा अक्षय कुमारबाहेक लारा दत्ता, वाणी कपूर र हुमा कुरैशीले महत्वपूर्ण भूमिका निभाएका छन् जबकी फिल्मको निर्देशन रंजीत तिवारीले गरेका छन् । -एजेन्सी